Hutano, 01 Nyamavhuvhu 2017
Izvi zvinotevera ongororo yakabudiswa neUNAIDS svondo rapera inoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV/AIDS dziri kuderera, vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemana vari kusarira munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishanga yeHIV/AIDS.
VaMugabe Vanoudza Vechidiki Vavo Kusaita Mhirizhonga
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo kuLupane kuMatabeleland North, VaMugabe vati vechidiki muZanu PF havafanirwe kuita zvemhirizhonga nekuti bato ravo ndererunyararo.
Vagari Vonetsana neKanzuru yeGweru
Vagari vemuGweru vari kugununguna zvikuru vachiti kanzuru yavo haisi kuita basa rayo nemazvo uye iri kutambisa mari pazvinhu zvisinei nevagari vemuGweru.
VaMorgan Tsvangirai Votaura Pamusoro peHutano Hwavo
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC, VaMorgan Tsvangirai varamba mashoko ari kuburitswa nemamwe mapepa ekuti vakaudzwa navanachiremba kuti vasarirwa nemwedzi mishoma vachirarama zvakapa kuti vadaidzire dare remhuri yavo.
Madzimai Anoshaya Okumbira Rubatsiro Kuti Vakwanise Kuronga Mhuri
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena sezvo vanhu vasina mari.
Dare reMakurukota Rozeya Bhiri rezveHutano
Zvisungo zveNusangano weKurambidzwa kweZvombo zveNuclear Zvinotambirwa neNyika Zhinji